❤️Quincy Quarters❤️1880's Remodeled Duplex - I-Airbnb
❤️Quincy Quarters❤️1880's Remodeled Duplex
IQuincy Quarters ❤️ yiDuplex ebuyiselwe kakuhle yee-1880 kunye nezinto zale mihla kunye nawo wonke umtsalane wembali. Le duplex ibe likhaya kwiintsapho iminyaka eyi-140. Yiza nosapho lwakho kunye nesilwanyana sakho kwaye ujabulele iminyaka eyi-140 yembali. IQuincy Quarters ikufutshane neZiko i-Oakley Lindsay, iSibhedlele seNtsikelelo kunye neDyunivesithi yaseQuincy, iibhloko ezikude neSouth Park kunye nemizuzu nje embalwa ukusuka edolophini yaseQuincy.
Yakha ukutya okunencasa okuphekwe ekhaya kweli khitshi lihle elinezixhobo ezitsha kunye neekhabhathi ezigcwele iRachel Ray cookware kunye nezitya zanamhlanje zokwenza isidlo sosapho okanye undwendwele abahlobo abathile ukuze basele.
Relax kwaye uzive uthuthelwe kwelinye ixesha kumagumbi okulala amabini aphezulu. Imigangatho yoMthi ebuyiselweyo, izitena eziveziweyo zika-1880 zinika la magumbi okulala aziva ekhululekile kwaye ekhululekile. I-master suite phezulu inebhafu epheleleyo eneshawa yokuhamba.
I-Downstairs inebhafu epheleleyo kunye neGumbi lempahla kunye newasha entsha kunye nesomisi ukugcina ukuhamba kwakho kulula; goduka nesutikheyisi ezele ziimpahla ezicocekileyo okanye ezilungele ezo ndawo zinde.
Igumbi lokuhlala liyindawo egqibeleleyo yokutshona kwisofa kwaye ufunde incwadi okanye ubukele umdlalo owuthandayo kumabonakude we-intshi ezingama-48 kunye nomabonwakude. Ikhaya linokukhanya okukhawulezileyo kwezantya ze-wifi zokusebenza okanye ukudlala.
Igumbi elingaphambili libamba itafile enkulu elungele umdlalo webhodi owuthandayo okanye indawo yokutya esemthethweni.
IQuincy Quarters inobuhlobo bosapho, abantwana abanemilenze emibini kunye nabantwana abane bamkelekile. SinePakethi kunye neDlala kunye nesitulo sokukhuthaza ukuba usisebenzise kunye nesango lomntwana. Cela izinto ezikhethekileyo zabahambi ngeNtsikelelo okanye iQuincy Vets Home - omabini amaziko alungileyo asondele entliziyweni yethu.
4.94 · Izimvo eziyi-106
Le yindawo entle yosapho, ibhloko eyi-1/2 kude nebala lokudlala kunye nepaki.
Ukunxibelelana neeNdwendwe: Olu luhambo lwakho; sifumaneka kuphela xa ufuna thina. Wamkelekile ukuba ufowunele/uthumele umyalezo kwiseli yam ngayo nantoni na. Ndihlala kufutshane eQuincy.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Quincy